Thu, Apr 26, 2018 | 22:44:49 NST
16:56 PM (1 month ago)
साङबहादुर तामाङ/सिन्धुपाल्चोक ।
घरमा आम्दानीको स्रोत कुनै थिएन् । जसो गरेपनि बिहान बेलुकाको छाक टार्ने धौ धौ भयो । नेपालमा भन्दा धेरै पैसा कमाउने ठाउँ मैले विदेश नै देखें । २०६९ सालमा म काठमाडौंमा रहेको प्रिज्मा ओभरसिस् इम्प्लोइमेन्ट प्रलिबाट मलेसिया गएँ ।
काम सामसङ इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा थियो । यो कम्पनीमा जान मैले एक लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरें । म्यानपावरले विदेशमा काम राम्रो छ भनेको थियो । कम्पनी पनि राम्रो नै हो ।
दुई वर्ष नौ महिना भएको थियो । काम सकेर फर्किदै थिएँ । बाटो काट्दा गाडीले हान्यो । साथीहरुले अस्पताल लगेछन् । मलाई त केही थाहा छैन् । तीन दिन पछि होसमा आउँदा त मेरो खुट्टा काटिइसकेको थियो ।
पैसा कमाउछु भनेर गएको दाहिने खुट्टा गुम्यो । २५ दिन अस्पतालमा बसें । उपचार खर्च पनि कम्पनीले नै दियो । घर फर्किने बेलामा टिकट खर्च पनि कम्पनीले नै दियो ।
कमाउन गएको मान्छे गरिखाने खुट्टा नै गुमाउन प¥यो । सग्ला खुट्टा लिएर गएको थिएँ, वैशाखी टेक्ने भएर फर्किएँ । घर फर्किंदा मलाई मरेकै जुनी भयो भन्ने लागेको थियो । श्रीमती र छोराछोरीलाई कसरी मुख देखाउनु भन्ने सोचले घाउको चोटले भन्दा पनि यस्तै कुराले मन भतभती पोलेको थियो ।
३५ वर्षको भएँ । खुट्टा छैन् । वैशाखीको साहारामा के मात्र गर्नु । दुई जना छोरी छन् । एउटी दुई कक्षामा पढ्छिन्, एउटी काखे छिन् । विहान बेलुका पेट भर्ने मेलो पनि नभएपछि मैले गाउँमै सानो खुद्रा पसल त थापेको छु । तर यसले खान बाहेक पुग्दैन् । कसरी छोराछोरी पढाउनु, दुःख बिमार हुँदा कसरी उपचार गर्नु ?
काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विदेशबाट अंगभंग भएर फर्किएकालाई क्षतिपूर्ति दिन्छ रे भनेर गाउँतिर धेरैले कुरा गर्छन् । बीमाबाट पनि पैसा पाइन्छ रे । खै मलाइ त केही थाहा छैन् । बुझ्न हिँड्न पनि सक्दिन् ।
कहाँ जानुपर्छ र कसरी पाइन्छ भन्ने पनि थाहा छैन् । फेरि दुर्घट्ना हुँदाको र उपचार गराउँदाको कागज पनि विदेशमै छुट्यो । मसँग त पासपोर्ट मात्र छ । क्षतिपूर्ति कसरी पाइन्छ होला ? क्षतिपूर्ति पाए त मेरो परिवारको उद्दार हुने थियो । मेरो भन्दा पनि छोराछोरीले पढ्न पाउँथे ।
अहिले क्षतिपूर्तिका लागि सहयोग गरिदिन जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सिन्धुपाल्चोकमा अनुरोध गरेको छु । मैले क्षतिपूर्ति पाउछु होला त ?
साङबहादुर तामाङसँग सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सिन्धुपाल्चोककी कार्यक्रम संयोजक रिना श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित ।